Holtop DC Inverter DX Mhepo Inobata Chikamu
HOLTOP HFM yakateedzana DX Mhepo Inobata Chikamu inosanganisira DC Inverter DX yemhepo inogadzirisa yekunze unit uye inowanzoitika frequency DX mweya
conditioner yekunze unit idzi mbiri dzakateedzana. Iko kugona kwe DC inverter DX AHU ndeye 10-20P, nepo iko kugona kweyakajairika frequency
DX AHU ndeye 5-18P. Pahwaro hwekugara uchidaro DX AHU, iyo ichangoburwa DC Inverter DX AHU inotora iyo yakasimbiswa mweya
jekiseni tekinoroji kuvhura nguva nyowani yekudziya-kupisa kupisa. Iyo nyowani dhizaini yemhepo-kutonhodza sisitimu uye yekuzvimiririra-yakagadziriswa
chirongwa chekutonga chinopa kutamba kuzere muchigadzirwa uye unounza vashandisi ruzivo rwekugadzirisa mweya.
Molecular kutyora tekinoroji mweya disinfection mhando yekunatsa sterilization rate iri kusvika 99,9%. Yakachena Mhepo Dhirivhari Rate (CADR): 480m3 / h, inokodzera nzvimbo 40-60m2. Budirira kubvisa kunhuhwira uye kunatsa PM2.5, haze, mukume, guruva, VOCs. Iyo yekunatsa mweya yakaedzwa munzvimbo ye microbiology yekuona nzvimbo. Mwero wekuuraya hutachiona hweH1N1 nehutachiona hweH3N2 ungangoita 99.9%.
Holtop Modular Mhepo Yakatonhora Chiller ndicho chigadzirwa chedu chazvino chinoenderana nemakore anopfuura makumi maviri ekutsvaga nekuvandudza, tekinoroji kuunganidzwa uye ruzivo rwekugadzira izvo zvakatibatsira kukudziridza chillers nekugadzikana & kutendeka kwekuita, yakagadziridzwa zvakanyanya evaporator & condenser kupisa kutamisa kugona. Neiyi nzira ndicho chakanakisa sarudzo yekuchengetedza simba, kuchengetedza nharaunda uye kuzadzikisa mweya wakasununguka wemamiriro ekunze.
VRF (Multi-connected air conditioning) imhando yepakati yekugadzirisa mhepo, inozivikanwa se "one connect more" inoreva iyo yekutanga firiji yemhepo inodzora iyo imwe yekunze unit inobatanidza maviri kana anopfuura emakamuri epamba kuburikidza nekupomba, iyo yekunze divi mweya-wakatonhora kupisa chinja fomu uye yemukati divi inotora yakananga kubuda kwemhepo kupisa chinja fomu. Parizvino, masisitimu eVRF anoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa zvidiki nepakati nepakati uye zvimwe zvivakwa zveruzhinji. Hunhu hweVRF Ce ...